आज प्रकाशित पत्रिकाहरुले मुख्य पृष्ठमा के-के लेखेका छन, हेर्नुहोस
काठमाडौं -आज प्रकाशित सबै पत्रिकाहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित छन् । शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई केही पत्रिकाले महत्त्वाकांक्षी योजना भनेका छन, कतिपयले सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा। सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन सके देशले काचुलि नै फेर्छ तर भन्दा जति सजिलो छ, कार्यन्वयनको लागि उस्तै गाह्रो छ ।
२०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत शिर्षकमा मुख्य हेडलाईन लेखिएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । यस्तै विपक्षीले आश्वासनको पोको भनेका छन । साथै कार्यन्वयनमा आशका ब्यक्त गरिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र रानी कोमल शाहले ५० औं वैवाहिक वर्षगाँठ मनाएको समाचार छ । समाचारमा कोमलले ज्ञानेन्द्रलाई मिठाइ खुवाउँदै गरेको तस्वीर पनि छ ।
आगामी बर्ष ईतिहासकै तिब्र बिकासको बर्ष शिर्षकमा मुख्य हेडलाईन लेखिएको छ । यस्तै ‘लोकसेवा आयोगले वैशाखभित्रै भर्ना खोल्ने’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । ५ सय स्थानीय तहले १० हजार कर्मचारी माग गरेको र लोकसेवाले वैशाखभित्रै भर्ना आह्वान गर्ने तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा’ शीर्षक दिएर टिप्पणी गरेको छ । यस्तै मेरो सरकारमा राजतन्त्रको झल्को २ सय १८ बुदे नीति तथा कार्यक्रममा पटकपटक मेरो सरकारको पदावली प्रयोग गरिन भनेर लेखेको छ । ‘न्यायालयमा सर्वसत्तावादको संकेत’ शीर्षकको समाचार छ । न्यायालयमा बढेको राजनीतिक प्रभावले मुलुक सर्वसत्तावादतर्फ प्रवेश गर्न लागेको पूर्वन्यायाधीशहरुको अध्ययनले देखाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘चार वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै भृकुटीमण्डपमा रजाई शिर्षकमा समाचार लेखेको छ । भृकुटीमण्डपमा व्यापारीको रजाइँ रहेको समाचार छापेको छ । बीसको दशकमा गुठीको २१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर खुला ठाउँ र मनोरञ्जन गर्ने स्थल थियो भृकुटीमण्डप तर अहिले कुरुप बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ । भृकुटीमण्डपमा ठेलामा सामान राखिएका छन् । टहरा बनाइएका छन् । कहीँ पाल राखेर पसल राखिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको समाचारलाई ‘विकास र समृद्धिमा केन्द्रित’ शीर्षकमा छापेको छ । यस्तै सरकारको मुख्य ३ नारा लेखिएको छ । “बारिका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन सबै हराभरा”, “चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नै देश”, कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन”
तिब्र अर्थिक बिकासको बर्ष शिर्षकमा मुख्य हेडलाईन लेखेको छ । यस्तै राजा जस्तै आम्रा नेता, शिर्ष नेताका निवास नै कार्यालय भनेर लेखेको छ ।
‘कांग्रेसका छायामन्त्रीको सूची तयार’ शीर्षकको समाचार छापेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम टुंगो लगाइसकेको र यसको घोषणा एक-दुई दिनमै हुने समाचारमा उल्लेख छ ।
समाचारमा लेखिए अनुसार गगन थापा शिक्षा मन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, डा. मिनेन्द्र रिजाल अर्थमन्त्री, दिलेन्द्रप्रसाद बडु गृहमन्त्री, डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री र भिमसेनदास प्रधान रक्षा मन्त्री रहने छन् । यसैगरी उमाकान्त चौधरी स्वास्थ्यमन्त्री, मीन विश्वकर्मा उद्योग मन्त्री, उमा रेग्मी महिला बालबालिका मन्त्री, जितेन्द्र नारायण देव सञ्चारमन्त्री र सञ्जय गौतम ऊर्जामन्त्री रहने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा लेखिएको छ ।
यस्तै किशोरसिंह राठौर वनमन्त्री, मानबहादुर विश्वकर्मा सामान्य प्रशासन मन्त्री, देवेन्द्रराज कँडेल पर्यटनमन्त्री, डा. डिला संग्रौला कृषि मन्त्री, अतहर कमाल मुसलमान कानुन मन्त्री र बहादुर सिंह लामालाई सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने देउवाको तयारी छ ।
देउवाले राजेन्द्रकुमार केसीलाई युवा तथा खेलकुद, बद्री पाण्डेलाई खानेपानी, पार्वता डिसी चौधरीलाई श्रम तथा रोजगार, सुजाता परियारलाई भूमी व्यवस्था र लक्ष्मी परियारलाई सहकारी मन्त्री बनाउने नयाँ पत्रिकाले जनाएको छ ।